Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 66
Nepali New Revised Version, Psalms 66
1 हे सारा पृथ्‍वी, आनन्‍दसाथ परमेश्‍वरको जयजय गर।
2 उहाँका नाउँको महिमाको स्‍तुति गाओ, उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्‍याओ।
3 परमेश्‍वरलाई भन, “तपाईंका कार्यहरू कस्‍ता भयानक छन्‌! तपाईंका शक्तिको महत्त्व यति महान्‌ छ कि तपाईंका शत्रुहरू तपाईंको सामुन्‍ने खुम्‍चिन्‍छन्‌।
4 सारा पृथ्‍वी तपाईंको अगि झुक्‍तछ, तिनीहरूले तपाईंको प्रशंसाका भजन गाउँछन्‌, तिनीहरूले तपाईंका नाउँको भजन गाउँछन्‌।” सेला
5 आओ, परमेश्‍वरका कार्य हेर, मानिसका पक्षमा उहाँका कामहरू कति भयानक छन्‌!
6 उहाँले समुद्रलाई सुक्‍खा जमिन तुल्‍याउनुभयो, तिनीहरूले पैदलै नदी तरे आओ, हामी उहाँमा आनन्‍दित होऔं।
7 उहाँले आफ्‍नो शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुन्‍छ, उहाँका आँखाले जाति-जातिलाई हेर्नुहुन्‍छ– उहाँको विरुद्ध विद्रोहीहरू नउठून्‌। सेला
8 हे मानिसहरू हो, हाम्रा परमेश्‍वरको स्‍तुति गर। उहाँका स्‍तुतिको आवाज सुनिओस्‌।
9 उहाँले हाम्रा जीवनलाई सुरक्षित राख्‍नुभएको छ, र हाम्रा खुट्टालाई चिप्‍लन दिनुभएको छैन।
10 किनकि हे परमेश्‍वर, तपाईंले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ, तपाईंले हामीलाई चाँदीलाई झैँ परिष्‍कृत गर्नुभएको छ।
11 तपाईंले हामीलाई कैदमा ल्‍याउनुभयो, र हाम्रा ढाड़मा बोझ लाद्‌नुभयो।
12 तपाईंले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्‌न दिनुभयो, हामी आगो र पानीबाट भएर गयौं, तर तपाईंले हामीलाई प्रशस्‍तताको ठाउँमा ल्‍याउनुभयो।
13 म तपाईंको मन्‍दिरमा होमबलिसहित आउनेछु, र तपाईंसित गरेका भाकल पूरा गर्नेछु–
14 म कष्‍टमा भएको समयमा, मेरा ओठले प्रतिज्ञा गरेका तथा मेरो मुखले उच्‍चारण गरेका भाकल।
15 म तपाईंलाई मोटा पशुहरू बलिदान चढ़ाउनेछु, र भेड़ाहरूको बलि। म साँढ़े र बोकाहरू चढ़ाउनेछु। सेला
16 परमेश्‍वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन, उहाँले मेरो निम्‍ति के गर्नुभयो मलाई भन्‍न देओ।
17 मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारें, र मेरो जिब्रोबाट उहाँको स्‍तुति भयो।
18 यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए, परमेश्‍वरले सुन्‍नुहुनेथिएन।
19 तर साँच्‍ची नै परमेश्‍वरले सुन्‍नुभएको छ, उहाँले मेरो प्रार्थनाका शब्‍दहरूमाथि ध्‍यान दिनुभएको छ।
20 परमेश्‍वरलाई महिमा होस्‌, जसले मेरो प्रार्थना अस्‍वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनुभएको छ।
Psalms 65 Choose Book & Chapter Psalms 67